Malite oru ngo na Git na Google Code (Akụkụ M) | Site na Linux
Malite oru ngo na Git na Google Code (Akụkụ M)
Anọ m na-esote blog na obere oge ma achọrọ m ịkọrọ gị ihe n'oge. Enwee m obi uto na m nwere oge ma kpebie itinye obere nkuzi banyere otu esi eji wuo oru Git ma bulite ya na ya Koodu Google.
Ọtụtụ nkuzi na-amalite site na cloning a repository (nbudata ya site na ihe nkesa dịpụrụ adịpụ dị ka Koodu Google, GitHub, Bitbucket , wdg ...), mana enwere ole na ole na-echebara ndị mmepe echiche nke na-amalite ihe ma chọọ ime atụmatụ ahụ site na iji sistemụ njikwa njikwa (CVS, Usoro nsụgharị na-emekọrịta ihe) dị ka Git.
Iji mụtakwuo banyere njikwa mbipute ị nwere ike ịhụ isiokwu ndị a na Wikipedia: Njikwa Version y CVS.
Mmezu nke sistemụ njikwa njikwa maka mmepe sọftụwia na - enye gị ohere izere ọnọdụ dịka nke anyị na - ahụ na Foto 1 (Enweghị m obi abụọ na ọ bụ ihe karịrị otu onye n'ime anyị).
N'aka nke ọzọ, ozigbo anyị matara sistemu a, anyị nwere ike ịgbatị ya ka o jiri ya na ngwa ndị ọzọ. Dịka ọmụmaatụ, enwere ike iji ya iji nweta njikwa ụdị nke akwụkwọ anyị na-edezi. Nke a na-enye anyị ohere ịdekọ akụkọ ihe mere eme nke ọrụ emere yana mmata nke ngalaba dị iche iche nwere ike ịbụ onyinye sitere n'aka ndị ọrụ dị iche iche.
1 Gịnị kpatara Git?
2 Kedu ihe kpatara na Google Code?
3 N'oge na-adịghị
Gịnị kpatara Git?
Ọfọn, tumadi n'ihi na ọ bụ otu n'ime ihe kachasị mma n'ebe ahụ. Ọ bụ ezigbo enyi anyị kere ya Laịnọs Torvalds na C na 2005 na ọ bụ nke a na-eji esochi nsụgharị nke Linux Kernel (ọ bụghị ihe ọjọọ, nri?).
Ọ dịtụ mfe iji ma dịka nyocha emere na 2013 nke na-ekwu goodbye, ndị ọrụ Eclipse IDE nwere nnabata nke 30%.
Maka ozi ndị ọzọ ị nwere ike ịkpọtụrụ nke Wikipedia (na Bekee) banyere Git, ma ọ bụ site na gị ukara website
Na saịtị gọọmentị anyị nwere ike ịchọta akwụkwọ niile dị mkpa, akwụkwọ na-ekpuchi akụkụ kachasị mkpa nke Git ịmatakwu ihe anyị ga-ahụ n'isiokwu a.
Luckily anyị nwere otu spanish version nke a sụgharịrị nke ọma ma zuru oke. Ntụgharị asụsụ dị GitHub i nwekwara ike inye aka mee ka ọ ka mma.
Kedu ihe kpatara na Google Code?
Ọfọn, enweghi ọtụtụ ihe ị ga-ekwu gbasara nnukwu Intaneti ... Ọ bụ ezie na enwere ọtụtụ nhọrọ maka ọrụ nnabata, ọtụtụ n'ime anyị nwere akaụntụ Google ya mere na i nweela aha njirimara gị Koodu Google, na-eme ka ihe dịtụ mfe.
Na mgbakwunye Koodu Google Ọ na-akwado ọtụtụ narị oru na asụsụ dị iche iche, ọ bụ n'efu, ọ bụ naanị maka ọrụ Open Source yana ọ dị mfe iji.
N'aka nke ọzọ, ị ga-ahọrọ otu n'ime ọtụtụ nhọrọ ma echere m naanị ịnwale ihe onye ọrụ ntanetị na-enye anyị. N'ihe nkwụnye n'ọdịnihu m ga-enyocha onyinye ndị ọzọ dị.
Ruo ugbu a nkenke okwu na ntinye na-esote anyị ga-enyocha otu esi emepụta ọrụ anyị Koodu Google.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » Nkuzi / Ntuziaka / Atụmatụ » Malite oru ngo na Git na Google Code (Akụkụ M)
Ọfọn, Google Code na-egbu m (na ịnweta ọrụ ọ na-akwado) n'ihi na a na-egbochi ya maka mba m (Cuba), ana m eji Github zuru oke, ọ bụ ezie na enwere m ike ịnweta koodu Google, anaghị m ahụ isi nke iji ihe ọzọ karịa Github, naanị ha kacha mma.
Ee, ha na-ekwu ọtụtụ ihe gbasara Nnwere onwe na webụ ma ha egbochila anyị.
Ivan Linux dijo
NSA na-eji ICANN egwu Google, United States nwere ike imechi ibe ọ chọrọ. Ọ bụrụ na Google meghere ọrụ ya na Cuba, ICANN ga-emechi ngalaba (nke Google agaghị achọ). Onwere onye kwuru VPN? ^ _ ^
Ọfọn, ọ bụ na Cuba. bandwidth nkesa na-mkpumkpu, otú a Okwey bụ a okomoko e.
Lee ha dị ọnụ ala: http://www.vpnbook.com/freevpn ($ 0 ga-abụ eziokwu)
Ihe ọzọ dị iche bụ na github ụfọdụ ụlọ ọrụ na-eji ya iji chọọ talent ọhụrụ ha, nke abụghị ikpe na koodu google. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na Google n'onwe ya na-enyefe GitHub ụfọdụ ọrụ Opensource ya, ị naghị eche na ọ bụ maka ihe?… Ekele mmadụ niile.
Koodu Google bara ezigbo uru, m na-eji ya maka ọrụ mahadum mana anaghị eji Git mana Subversion, m na-eji svn n'ihi na abụ m onye isi m
Laa azụ n'ụbọchị ahụ, akwadoro m nkuzi nkuzi a.
Achọpụtara m na ọ magburu onwe ya.
Zaghachi na escorponox
Ọ bụrụ na echetaghị m njọ, Usoro Google na-ekpuchi ọdịnaya editable, downloads na ndị dị otú ahụ ruo ọnwa. Anaghị m eji ya n'ihi na anaghị m eso ya eme ihe, mana echere m na ọ ga-abụ ihe ị ga-atụle n'ime omimi n'ihi na ọnwa Jenụwarị 2014 ha gbanwere na mberede. Na na m bụ pro Google XD
Eziokwu bụ na amaghị m ihe mgbochi Google Code, ọ dị m ka ọ dị mfe ịmalite na-enweghị ike ịmepụta akaụntụ ọhụrụ (ebe ọ bụ na ọtụtụ ga-enwerịrị akaụntụ Google).
Ọ bụ nhọrọ m gbalịrị, ọ baara m uru ma kesara ya. N'ezie enwere ọtụtụ nhọrọ ndị ọzọ ka mma, mana ha niile dabere n'otú ọrụ ọrụ nke ọ bụla dị.
Anyị ga-ahụ ihe Google na-echere anyị na 2014, amaara m na ha na-akwadebe saịtị ọhụrụ iji mezie ọrụ nke ndị mmepe.
Ọ dabara na ha bụ ngwaọrụ 2.0, mgbe ha weere iwu nke na-anaghị eme ka onye ọrụ kwenye, otu na-akwụsị iji ya na voila! N'ezie, ị ga-eburu nke ahụ n'uche mgbe niile, ebe ọ nwere ike ime na ọ kwụsịrị ịdị na-enweghị onye ịchọrọ ya ...
Mara ebe nchekwa APT na Ubuntu